Sekuvele isikhalo ngokuminza komfundi KwaDukuza | Eyethu News
Sekuvele isikhalo ngokuminza komfundi KwaDukuza
“Sikhathazekile ngokuthi imicimbi efana nalena isiyindlela yokuthi abantwana baziphathe ngendlela ebudedengu.”
Uphiko lwentsha kwinhlangano ye-SA Communist Party, iYoung Communist League (YCL) seluzwakalise okukhulu ukukhathazeka ngesehlakalo sokushona komfundi oneminyaka eyishumi nesikhombisa, udlule emhlabeni ngemuva kokuminza kamuva nje.
Umfundi uye walahlekelwa yimpilo yakhe ngemuva kokubhekana nobunzima ngesikhathi ebhukuda olwandle eBlythedale Beach khona kule ndawo. Ngesikhathi kwenzeka lesi sehlakalo lo mfundi ubeyingxenye yeqembu labafundi abakede bezijabulisa olwandle kulandela ukuphothula iizvivinyo zokuphela konyaka.
Inhangano ye-YCL inxuse abafndi ukuthi baqaphele kakhulu uma beyingxenye yemicimbi yokluphothulwa konyaka (pens down parties), kanti futhi nabantu abadala bathola ithuba lokuzenzela nje ezinganeni zesikole. Sifisa ukuzwakalisa ukuzwelana kwethu nomndeni, yisikole kanye nabangani balo mfundi. Sifisa futhi nokushayela ihlombe iziphathimandla ngokusebenza ngokuzinikela ukuzama ukuhlenga impilo yalo mfundi,” kubeka le nhlangano esitatimendeni esithunyelelwe iphephandaba iLembe Eyethu.
Le nhlangano ibuye yanxusa omasipala baKwaDukuza kanye nowaseMandeni, nokuyibona masipala esifundnei seLmebe abanamabhishi, ukuthi baqinise ezokuphepha kulezi zindawo.
“Okunye esifisa ukukunxusa kubafundi ngukuthi bayeke umkhuba wokudabula imifaniswano yabo yesikole emuva kokuphothula izivivinyo zabo. Imifaniswano lena isengabuye isetshenziswe ngabanye abafundi,” kuphetha unobhala wale nhlangano esifundeni i-Greater KwaDukuza, uMnuz Sandile Khubisa.